U turjun mawduucyada WordPress iyo plugins qaab fudud | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | Dulucda, WordPress
Tarjumida mawduucyada iyo waxyaabaha la isku xiro waxay u horseedi karaan dhibaatooyin aan loo baahnayn, gaar ahaan haddii aan isku dayno inaan sameyno annagoo gacanta ku saxeyna koodhka Si kastaba ha noqotee, waxaa jira bedel kale oo aan jeclaan lahaa inaan maanta idinla wadaago oo waxtar badan yeelan kara maxaa yeelay way fududahay marka la barbardhigo kan kale iyo maxaa yeelay way ku caawin kartaa badbaadi waqtiga qaaliga ah shaqadeenna.
Ugu horreyntii, waxaan u baahannahay inaan maskaxda ku hayno in dhammaan mawduucyada WordPress aan la turjumi karin, gaar ahaan haddii ay da 'yihiin. Mawduuca si loo tarjumo, waa inuu noqdaa »turjumaad-diyaar ah»Iyo in qoraaga template uu diyaariyey si sahal loogu tarjumi karo luqad kasta isagoon wax ka badalin koodhka. In kasta oo aan si macquul ah u samayn karno tarjumaad gacanta ah, waa run in tani ay na siin karto madax-xanuun ka badan inta aan u baahanahay, sidaa darteed maanta waxaan diiradda saari doonnaa barnaamij loogu talagalay in si sax ah loogu fuliyo shaqadan.
Barnaamijka waxaa loogu yeeraa Poedit Hadana haddii aadan wali fursad u helin inaad isticmaasho, waxaan kuu sheegayaa inuu yahay softiweer bilaash ah sidaa darteed waxaa loogu isticmaali karaa bilaash iyo waliba barxad kasta. Si aad u soo dejiso, waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad ka hesho boggeeda rasmiga ah isku xirkaan. Markaad soo dejiso, kaliya faylka su'aasha ku jira oo rakib. Markaad tan sameyso, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad ganacsiga hoos ugu dhacdo. Waa inaad ogaataa inaad haysato saddex ikhtiyaar oo kale oo aad si guul leh ugu turjunto mawduucaaga ama qalabkaaga.
1 Tarjum Mawduucyada adoo abuuraya buug-yare cusub
2 Adeegso feylka luuqada ee mowduuceena keeno
3 Ka shaqee feylka POT
4 Iyo plugins-ka?
Tarjum Mawduucyada adoo abuuraya buug-yare cusub
Poedit wuxuu ku shaqeeyaa buugaagta oo aan ku turjumi karno ereyada aan u aragno inay ku habboon yihiin.
Doorashadan koowaad waxay nagu filnaan doontaa inaan barnaamijka fulino oo aan aadno Diiwaanka liiska kore ka dibna dooro ikhtiyaarka «Buug-yare cusub«.
Markaan sidan yeelno, waxaan ku habeyn doonnaa buug-yaraheena annaga oo marin u helayna xulashooyinka ka soo baxa menu-ka Kaatalog iyo dejinta Propiedades. Halkan waxaan ku badali karnaa astaamo dhowr ah inkasta oo ay nagu filnaan doonto inaan doorano luqadda tarjumaadayada Isbaanishka isla markaana aan hubino inaan ku shaqeyno codeynta UTF-8.
Waxaan gujin doonnaa Aqbal ka dibna waxaan ka badbaadin doonnaa buugyarahayaga meeniska Fayl, Kaydso Sida ... oo waxaan ku meeleyneynaa goobta ku habboon mowduuceena (guud ahaan gudaha luuqadaha ama luuqadaha) iyo magac soo socda qaabka Luqad_PAIS (tusaale ahaan es_ES).
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa helitaanka tixraacyada mawduuceena si aan uga shaqeyno tarjumaadda. Waxaan tan ku samayn doonnaa xulashada xulashada Cusboonaysiinta ilaha laga dhex helay liiska Kaatalog. Markaan tan samaynay waxaan ku shaqeyn karnaa ereyada la turjumi karo oo aan shaqada ku geli karnaa. Waxaan dooran doonnaa xilli kasta oo aagga hoose daaqad yar oo la yiraahdo Tarjumaad ayaa soo muuqan doonta, taas oo aan ku geli doonno mid u dhiganta luqadda la doonayo, xaaladdan oo Isbaanish ah.
Adeegso feylka luuqada ee mowduuceena keeno
Waxaan u tagi doonnaa galka luqadda ee mawduuceena oo waxaan dooran doonaa feylka luqadda asalka ah si aan ugu furno Poedit. Guud ahaan, feylkan waxaa badanaa loo yaqaan "default.po" ama adigoo raacaya magaca luqadda qaabka aan kor ku soo xusnay (tusaale ahaan_ en_GB.po).
Marka faylkani furmo ayaan aadi doonaa Propiedades gudaha menu Kaatalog oo waxaan ku dabaqi doonnaa dejinta aan u aragno inay ku habboon tahay, in kastoo aysan tani ahayn mid adag, laakiin waa ku habboon tahay.
Waxaan badbaadin doonnaa buugyarahayaga loo xilsaarayo qaab magac magacaabid ah oo aan horay ugu aragnay galka luuqadaha mawduuceena ka dibna waxaan ka shaqeyn doonnaa turjumaadda ereyada aan u aragno inay habboon yihiin. Dabcan dhamaadka markale ayaan keydin doonaa si macluumaadka loo cusbooneysiiyo.
Ka shaqee feylka POT
Waxaan fureynaa codsigeena iyo liiska Diiwaanka waxaan dooran doonaa ikhtiyaarka Buug-yare cusub laga soo qaaday faylka 'POT'
Laga soo bilaabo menu-ka Kaatalog y Propiedades waxaan wax ka badali doonaa macluumaadka u dhigma.
Waxaan keydin doonnaa feyladeena iyadoo la raacayo qaabka magacaabista luuqada_COUNTRY waxaan bilaabi doonaa tarjumaada kadibna waan keydin doonaa oo cusbooneysiin doonaa macluumaadka.
Markaad sameyneyso tarjumidaada, waa inaad maanka ku haysaa in qiimaha PHP-da aan la iska indhatiri karin tarjumaadeena maxaa yeelay haddii kale qaladaad aan la rabin ayaa soo muuqan kara. Ha ilaawin qaabka magacaabista sidoo kale maxaa yeelay haddii aad magacaaga ugu magacawdo qaab ka duwan sidii lagu taliyey, tarjumaaddu ma shaqeyn doonto.
Nidaamku waa la mid yahay, inkasta oo magacu si macquul ah u beddelo. Si loo kaydiyo kaydiyayaasheena Po waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la magacaabo feylkeena iyadoo la raacayo qaab dhismeedka soo socda: Qaybta plugin ee aan tarjumeyno + Qoraalka (-) + luqadda + DALKA.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Dulucda » U turjun mawduucyada WordPress iyo plugins qaab fudud
NASA waxay rabtaa inay kugu dhiirrigeliso dalxiis bannaan oo leh seddexdan boodhadh